रोनाल्ड बर्नार्ड, इर्मे Schiffers, विज्ञापन ब्रोयर, को Coperperie Vrije मीडिया: सच्चा चाहने को लागि AIVD सुरक्षा जाल? मार्टिन भिजल्याण्ड
यस लेख मा म यस कारण मा विस्तार गर्न चाहन्छु कि मैले केहि लेख मा पहिले देखि नै भन्यो कि नीदरल्याण्ड मा वैकल्पिक मीडिया पुरा तरिकाले नियंत्रित छ। म सचमुच 'गुप्त सेवा द्वारा नियंत्रित' मा उद्देश्य। नीदरल्याण्डमा, क्लबलाई AIVD भनिन्छ। साबित गर्न सक्षम हुनु, तपाईं वास्तवमा घुसपैठ गर्नु पर्छ। कि म लगभग असंभव सफल भयो, तर त्यहाँ धेरै क्रियाकलाप छ, जसले मलाई निकासी गर्यो। यसकारण म के गर्नेछु लेखकले मेरो आविष्कारको इतिहासलाई संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्दछ र आफैलाई बुझ्नको लागि किशोरीलाई संकेत गर्दछ कि तपाइँ मेरो निर्णयसँग सहमत हुनुहुन्छ वा होइन।
जब मैले पाँच वर्ष अघि लेखेँ, यो सधैंभरि गर्न को लागी इरादा थिएन। मेरो अन्तिम नियोक्ता, जहाँ मैले अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री प्रबन्धकको रूपमा काम गरें, दिवालिया भयो र कामको क्रममा मैले पछि लागेँ, मैले अचानक मेरो पेटलाई 'डोजो बनाएको सूट र पट्टेको कार' भरिएको छु। मैले लेख्नको लागि निर्णय गरे (जस्तै मैले 'अस्थायी' सोधे) र मेरो पुन: सुचारु गर्न क्षति नगर्ने एक छद्म नाम छनौट गरे। त्यसैले म आफैलाई राम्रो परामर्शमा खारेज गर्न चाहन्छु, त्यसैले म एक लाभको हकदार हुँ। त्यो लेखनले (अब रोकिएको) वेबसाइट अरेन्डे जेभतको अर्जेगुनोगग मा लेखको साथ सुरू गर्यो र मेरो आफ्नै वेबसाइटमा समाप्त भयो। केहि महिना पछि, साइट अचानक अनस आरोग कोसिस को समयमा एक दिन 150 हजार सम्म पुग्यो। यो थियो किनभने मैले क्यामेराको साथ 'अपराध दृश्य' मा जाने निर्णय गरे, किनकी पीटर आर डी देवेजले टीवी मा भन्यो कि प्रत्येक कपाल र हरेक फाइबर यस (स्वयं) हत्याको मामिलामा जांच गरिनेछ। म उत्सुक थियो कि त्यो वास्तवमा यो मामला थियो र स्थानमा एक शौकिया क्यामेराको साथ गए। त्यहाँ मैले एक्सा फेला पारेको ठाउँमा धेरै कचरा फेला पारेको थियो र साक्षीहरूले भने कि उनी त्यहाँ आफ्नो कुकुर त्यहि बिहान छोडेनन्। त्यसोभए त्यसो भए सबै नीदरल्याण्डहरू कब्जा गरियो र मैले एनएफआई स्वतन्त्रता रिपोर्ट प्रकाशित गरें। त्यो समाचारमा ठूलो भयो, किनकि कसैले पहिले कुनै पनी छैन, तर मेरो नाम उल्लेख गरिएको छैन (जसले मेरो साइटमा थप दर्शकहरूलाई पनि दिनेछ)।
वैकल्पिक मीडिया उन दिनों में हलचल हो गई और मैं एक लेखक के रूप में शुरू होने से पहले मैं उन साइट्स और लोगों द्वारा मैंने नहीं सुना था या शायद ही कभी सुने हुए और कम से कम अवशोषित था। मीका काट उनीहरु मध्ये एक थिए। मलाई पनि फ्रान्सेयर संगोष्ठीमा निमन्त्रणा गरिएको थियो र पनि 'फ्रंटियर पुरस्कार' को लागि नामांकित गरिएको थियो। त्यसपछि पहिलो चीजहरू बाहिर उभिए। त्यसैले म साक्षात्कार गरेर जॉन कन्मेमुलर, तर अचानक त्यो अब साम्राज्यमा जान सकेन। मेरो प्रदर्शन फिलिम गरिएको थियो, तर जहाँ पनि प्रसारण हुँदैन। मार्सल मेसिंग (वैकल्पिक मिडियामा एक प्रसिद्ध नाम) मलाई केहि सम्मोहनवादी को समाप्ति शो पछि एक कोठा मा गयो। यहाँ उनले मलाई निजी सावधानी दिए कि मलाई धेरै सावधान हुनुपर्दछ। "तिनीहरू" मलाई मलाई निर्देशित ऊर्जा हतियारमा लक्षित गर्न सक्थे।
वैकल्पिक मिडियामा मेरो टर्नआउटले हालसम्म दर्जनौं साइटहरु द्वारा भयानक विरोध गरेको छ जुन मैदानबाट उत्पन्न भएको छ, विशेष गरी मेरो ठेगानामा लिबिल र निन्दाको लागी। मैले पत्ता लगाए कि यो स्वतन्त्रता र विद्रोह पछि ड्राइभिङ्ग बल एक राज्य कर्मचारी (ओटीओ पुजारी) थियो, जसलाई जेरोन हगोगोइजे नाम दिइएको थियो, जसले त्यस समयमा शाब्दिक रूप मा मीका काटेर कोने को वरपरको जीवन बिताउँथ्यो। यद्यपि, म मीका काल द्वारा संकलित भएको थियो। केट त्यसो भए तापनि वैकल्पिक मिडियामा ठूलो नाम, किनभने उहाँले उच्चतम मानिस न्यायको pedophilia विरुद्ध वर्षको लागि लडिरहेको थियो: जोरिस डेमकिंक। काटले मलाई Rustige Spijker नींव को डेम्यांक प्रक्रियामा आउन निम्तो दिए र मेरो ईन्धन भुक्तानी गर्यो। यो सबै समय कट्टर फ्याँक्न सक्षम भए जस्तो कि यो केहि थिएन, त्यसैले ध्यान आकर्षित गर्यो। सत्रको दौडान मैले पाएको थिएँ कि आरोप लगाइने आधारको सदस्यहरू मलाई हानिकारक र डरलाग्दो थियो। त्यो मेरो रुचि बढ्यो। तिनीहरूले मलाई उत्सुकतापूर्वक किन प्रतिक्रिया व्यक्त गरे? म पनि तिनीहरूको शिविरमा थिएँ। जब मैले नींवको सदस्यको लिङ्गमा सुन्तला रिबनलाई देखे, मैले सोचेँ कि कसरी डच राज्यमा आक्रमण गर्ने वा कम सेन्टिमिशनको सदस्यले नारंगी रिबन लुगा लगाउन सक्दछ। यसैले म त्यस आधारमा भएका मानिसहरूको पृष्ठभूमिमा खुम्चिए। उदाहरणका लागि, म यस तथ्यमा आयो कि यो रिबन क्यारियर (बेन्टा ओटान्स नाउँ) ले स्किफोल वरपरको जमीनको मूल्य उन्नयन गर्न मद्दत गरेको थियो। पट परिवार, जसले यस आधारलाई रस्जिद स्पाजिकरको वित्तपोषण गरेको थियो, त्यसकारण डच राज्यको अरबौंबाट ती भूमिहरू (फिक्स्चर विकास परियोजनाहरू सहित) को लाग्न सक्छ। मैले पनि पत्ता लगाए कि आधार संग सहयोग ज्याक एब्रमोफएक व्यक्ति जसले यौन दुर्व्यवहार चलचित्रहरूको साथ अमेरिकामा 'उच्च-श्रेणी' गरेको थियो। त्यसैले मैले गम्भीर रूपमा र गलतीले पत्ता लगाए कि क्याट पट परिवार द्वारा वित्त पोषित भएको थियो र यो सबै एक महान धोखाधडी हुन गयो। यसकारण डेमकिंक विरुद्धको मामला pedophile दुर्व्यवहारको वास्तविक क्षणको वरिपरि घुमाउँदैन, तर स्पष्ट रूपमा डच राज्यको विष्फोटको बारेमा धेरै बढी।
यो सबै भन्दा पहिले, मलाई पहिले नै मार्सेल मेस्सिङ्ग द्वारा देशको दक्षिणमा वैकल्पिक मिडियामा सेनामा सामेल हुन एक प्रकारको बैठकको लागि आमन्त्रित गरिएको थियो। त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ केही सहयोग पाइयो किनभने मलाई मेरो ईन्धन लागत तिर्न दान गरिएको थियो। यो स्पष्ट थियो कि मेरो WW फायदा एक घट्दो व्यवसाय थियो। मैले त्यतिबेला जीवित जीवन बिताउन सकिनँ र त्यस समयमा मेरो घर पहिले नै विभेदकारी विरोधी-स्क्वाटिंगमा बाँच्न बाध्य भएन। यसैले मलाई 4,5 घण्टा र 4,5 घण्टा पुरानो ईन्धन सिपाही कारमा ड्राइभ गर्न गाह्रो थियो। वैकल्पिक मिडिया वेबसाइटहरूको बैठकको क्रममा, जहाँ व्यावहारिक रूपमा नाम र प्रसिद्धिको सबै ती वैकल्पिक मीडिया (मार्सेल म्यासेजिंग, एड ब्रोरे, दिशानिर्देशनायत, गोर्खा जोनर्स, इत्यादि) को सहयोगमा थिए, सहकारीको स्थापनामा चर्चा गरिएको थियो। वैकल्पिक मीडियाको लागि सामूहिक च्यानल हुनुपर्दछ। मार्सेल म्यासेजले संकेत गरे कि उनीहरूलाई लाखौं मानिस बनाउन चाहने व्यक्तिहरूलाई थाहा थियो। मैले पाए कि एक उल्लेखनीय अवलोकन र यसले यो "मानिस" हुनेछ जसको प्रश्न उठायो। मैले कहिल्यै भेट्टाएन, किनभने मेरो उपस्थिति एक-अर्का थियो। मैले मीका काटीको प्रदर्शन पछि स्पष्ट रूपले खतरा बनायो।
ट्याग: अभिनेता, अभिनेता, विज्ञापन Broere, aivd, alternatievaae मिडिया, Arjan Bos, अरेजन बोस, नियन्त्रणको विरोध, कोओपरेटी भेरी मीडिया, नि: शुल्क मिडिया, DVM, पृथ्वीको विवाद, विशेष, काम गरे, गुप्त सेवा, Guido Jonkers, इरमा Schiffers, मार्सल मेसिंग, रोनाल्ड बर्नार्ड, WantToKnow
15 अगस्ट 2017 मा 18: 53
राम्रो मार्टिन तपाईं आफ्नो अंतर्दृष्टि र तपाईंको लेख संग बोबनिक स्थिति को बाधा।
तपाईंले खेल खेल्ने सबै खेलहरू जस्तै AiVD-
'वैकल्पिक मीडिया (' pawns ')। त्यसपछि तपाईं लोकप्रिय हुनुहुन्न। AIVD जासुसहरूलाई, घुमफिर भन्दा sheeple कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ bujbaantje वा सेवानिवृत्त हजुरबुबा आदि आदि रूपमा थाह छ नेदरल्यान्ड्स जहाँ अक्सर ट्याप देश छ त्यहाँ धेरै छन् कि मान। मलाई संसारको शीर्ष 10 मा लाग्छ। केवल मानिन्छ कि यो निश्चित रूपमा कानूनी रूपमा छैन।
15 अगस्ट 2017 मा 22: 31
यी सबै साइटहरू पनि गोप्य रूपमा पैसा कमाउँदै दानका लागि सोध्छन्। यो एक ज्ञात रणनीति हो, प्लाई बाहिर बाहिर हावा पकडने, एक जो वास्तव मा छायाकार छ र लाल प्रतिशत छैन।
उनीहरूले मार्टिन व्रिरेन्डनको कल्याणलाई सहयोग पुर्याएमा यदि गम्भीर सबै वेबसाइटहरू (AIVD द्वारा वित्त पोषित) सबै कुरा राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ?
दायाँ ..और त्यो इरादा थियो।
भाषणको स्वतन्त्रता आधिकारिक रूपमा अवस्थित हुन सक्छ, तर तपाईं सजिलै सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा बर्बाद गरिनेछ। यस तरिकाले तपाइँ आफ्नो आलोचना पनि आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ।
16 अगस्ट 2017 मा 11: 06
र सबैजनाको लागि "हो, तर तपाईं दान संग पैसा कमाउनुहुन्छ" को लागि यो यहाँ जाँच गर्नुहोस्:
र सबैजना जो सोचिरहेका छन्: "तपाईंको साइट किन अझै अवस्थित छ, किन तिनीहरू तपाईंलाई नीलाबाट बाहिर नपुगेका छन्?"
किनकि राज्यले 'अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता' स्वीकार गर्नैपर्छ जुन अब अवस्थित छैन।
16 अगस्ट 2017 मा 11: 27
र जो लोग्ने चिन्ताका लागि: "कसले भन्छ कि तपाईं नियन्त्रणमा राख्नुभएन?"
के तपाई साँच्चै सोच्नु हुन्छ कि म आफैलाई मज्जाको लागि वा आर्थिक लाभको लागि अफसोस हुन सक्छु; मेरो परिवार अब मलाई हेर्न चाहन्छु; मैले अब मेरो छोरीलाई देख्न सकिनँ र आर्थिक रूपमा बर्बाद गरें?
पुरानो स्कूलमा साथमा आउन आउँदा मलाई विरोधी-स्क्वाटिंग (जब मैले मेरो छोरीको लागि कोठाको साथ कोठामा सुन्दर घर पाएको छु)!
16 अगस्ट 2017 मा 11: 33
र म किन मेरो आफ्नै नियोक्ता प्रदर्शन गर्न चाहान्छु कि वास्तवमा यो मामला हो? म AIVD को प्रदर्शन किन चाहान्छु यदि म यसको लागि काम गर्नेछु?
क्या तपाईं कभी इरमा Schiffers र अन्य सुनेको छ कि AIVD यसको पूर्वंत पूर्व पूर्व जर्मनी मा Stasi भन्दा समाज मा गहन छ?
स्टेसीले फ्लैटको प्रत्येक ब्लकमा कम्तीमा 1 गोप्य एजेन्ट गरेको थियो। सोच्नुहोस् कि चीजहरू युरोपमा फरक हुँदैछन्। गोप्य सेवाहरूको तम्बूहरू लामो छन् र सबै तहहरूमा बस्छन्। धेरै व्यक्तिहरू "अतिरिक्त स्नैबल" वा "आयको अस्पष्ट स्रोत" छन्।
15 अगस्ट 2017 मा 19: 33
यो ArgusOOGradio प्राण अचेतन (सेक्स) तिनीहरूले बनाउन लेख मा शामिल सन्देशहरू कि Argusoog गरे प्रयोग गए अघि लामो छैन पत्ता थियो। ArgusOOG टोलीका केही सदस्यहरूले पनि नियमित रूपमा लेखेका व्यक्तिहरूलाई इमेल ठेगाना र पीसी तोक्न चाहने साहस गरेको थियो जुन नियमित रूपमा लेखिएका टिप्पणीहरू (चिनियाँ) टिप्पणीहरू पोस्ट गर्थे। LUCA वैन Dinter एक समय संयुक्त राष्ट्र भ्यान Dinter विज्ञापन गर्न एक मंच मा Argusoog थियो बल को AIVD तर्फबाट केही गर्न अनुभवहीन नागरिक धेरै अर्थहीन र विनाशकारी संग गिरावट खुला थिए कि समस्या मदत गर्न ड्राइभिङ थियो पहलहरू।
15 अगस्ट 2017 मा 20: 01
खैर, जब 'सरकार' वास्तव मा मिच बिल्ल लाईन गर्न चाहान्छ तब उनि आयरल्याण्ड को लागि एक प्रत्यर्पण अनुरोध गर्न सक्छन्। के ऊ साँच्चै त्यहाँ छ? अझै सम्भव छ।
विशेष छ कि त्यो होलोकस्टन इन्कारियल देखि प्राप्त हो। यसको अतिरिक्त, तिनीहरू पूर्ण नागरिकको रूपमा पूर्ण रूपमा आफ्नो सबै आपराधिक मामलाहरु बिच बिचमा आपराधिक र आपराधिकृत गरे। यी कुराहरूको प्रकृतिमा भेडाले टीबीएस पाउनेछ। खैर, जो कोही पनि सुरक्षित छ, पर्यटकले विदेशबाट बाहिर निस्कन सक्छ। कसले त्यो भुक्तान गर्दछ?
हामी परिवर्तन हुँदैछौं (रोटरडैम) नृत्यबाट बच्न सक्दिन। क्षमा गर्नुहोस्, यो पनि उल्लेख हुनुपर्छ।
मार्टिनको सुपर व्याख्या।
यसबाहेक मारिया वान बोकेलेन, जय मारिया, जुसित आफैंको निर्माणमा उनको कार्यालय, अपरिचित मनोवैज्ञानिक, बरु एक एल्लेसिनेटेजे।
जो Micha कैट एक साक्षात्कार लागि उहाँले बाल शोषण लड्न वर्षसम्म प्रयोग गरेका थिए किनभने (अर्थात् बच्चा दुरुपयोग, जो pedosyndrom आफ्नो pedo चन्द्रमाहरू ग्रस्त जगतले) Demmink चुनिएको र उसलाई रोशनी मा धारण थियो मरियम Boekelen र FRANS वैन der Reep ।
यदि तपाइँ Wearechange को रूपमा स्पॉटलाइटमा राख्नुहुन्छ भने, छुट्याउने वैकल्पिक मिडिया, तपाइँलाई थाहा छ कि यो WeAre परिवर्तनको साथ हो। यसैले हो हड्डी पनि जाँचिएको छ। मिठो महिला वकील वान डेर प्लसले कस्तो भूमिका खेल्नेछ? यो पनि केहि जस्तै।
15 अगस्ट 2017 मा 20: 25
राम्रो कानूनी पेशा। एक अर्ध वकीलले सरकार / aivd संग काम गर्दछ वा सँगसँगै। अर्को आधा यो गर्दैन र त्यो पहिलो समूहबाट डराउँछ। डरलाग्दो डरले उनीहरूको पेशाबाट अलग रह्यो, पछिल्लो समूहले 'मद्दत' को 'व्यवस्थाको शासन' मा उभिरहेको छ। संक्षेपमा सारांशित, तयार-से-खाने खानेकुराहरू।
16 अगस्ट 2017 मा 03: 10
क्यामोनन, सार्वभौम व्यक्ति र लूस भ्यान डाइटरको बारेमा, तपाईले कल्पना गर्न सक्नु भन्दा जटिल र परिष्कृत छ। तपाईंले माथिको भिडियोमा बोल्ने व्यक्तिलाई सुनेको छ, र पछि लुका भ्यान डाइटरको साथ चरण खेल देख्नुहुन्छ, AIVD एजेन्ट कार्ल बागस।
चार्ल्स बी को नामित विकृति पनि आन्तरिक मानिसलाई डराउनु र निरुत्साहित गर्न एक कदम उठाइएको थियो। फ्रान्सिस कैपिटल पनि साजिशमा थिए।
यी वास्तविक साजिश हो जुन जुन ठाउँ हुन्छ। त्यो लगभग एक 'साजिश विचारक' / 'सच्चा खोजकर्ता' को बिना।
त्यस विषयको लागि अभिनेता कार्ल, साजिश भूमिमा धेरै कम प्रोफाइल बनी रह्यो, र फ्रान्सिसले मार्टिनसँग रेडियो प्रसारणमा देखा पर्ने हिम्मत गरेनन्, डरलाग्दो डरलाग्दो।
हामी एकै रोशनीमा मिशेल विटिटिताको अपराधमा साथी बिए वैन किसेलको विच्छेद राख्न सक्नुहुन्छ।
त्यस विषयको लागि, म यस विषयमा कुनै पनि प्रकारको छलफल स्वीकार गर्दैन। म जान्दछु यो ठीक छ।
पूरकहरू वा समझदार प्रश्नहरू सधैं स्वागत छ।
16 अगस्ट 2017 मा 10: 22
मलाई थाहा छ कि त्यहाँ सिपाही नागरिकहरु र उपयोगी बेवकूफहरु को एक महान जुलूस छ र उनि सुधार नहीं गरेको छ। ती व्यक्तिहरूले लाभ उठाउँछन् (वित्तीय लाभ) धोकाहरू हुन्, चाहे चाहे वे सरकारको लागि काम गर्ने व्यक्ति हुन्।
16 अगस्ट 2017 मा 08: 26
इर्ममा तपाईंको बारेमा लेखिएको छ .यो तपाईले जवाफ दिनुहुन्छ .म2X लाई उनको साइटमा लेखियो। कुनै उत्तर र यो प्रश्न उनको साइटमा देखिने छैन!
16 अगस्ट 2017 मा 10: 17
इम्मा, संयोग से, साक्षात्कार मा धेरै चालाक को रूप मा नहीं आती। उदाहरणका लागि, यदि हामी आर्गन बोससँग यो लेखमा साक्षात्कार लिन्छौं, त्यो प्रायः धेरै ऊनी र धेरै अनावश्यक कुरा गर्दै छ। मैले कहिलेकाँही गम्भीरतापूर्वक आश्चर्य गर्यें कि यदि उनी आफैले लेख लेख्न सक्षम छन् वा यदि उनीसँग एआईवीडी सहायक छ। विज्ञापन Broere मलाई केहि चीजहरु लिखने को लागि पर्याप्त स्मार्ट लाग््छ।
एर्गन बोस्ट ओल्ड माटर्स (जो निश्चित रूप देखि राम्रो साक्षात्कार हुनु पर्छ किनकी वैकल्पिक मीडिया "यो पनि गर्न सक्छन्") जब वे जाग रहे प्रश्न पूछता है, दोनों विज्ञापन ब्रोरे और इरमा एक ऊनी कहानी को चित्रण लगता है।
विज्ञापन ब्रेकमा तपाईंले देख्नुहुन्छ कि उनी सधैँ शीर्ष बायाँ (दर्शकको लागि) देख्न सक्छन्, धेरै स्पष्ट र बारम्बार जब उनी आफ्नो जागरण प्रक्रियाको बारेमा आफ्नो कथा बताउँछन्। यद्यपि, जब उनी आफ्नो विश्वविद्यालय अवधिको बारेमा बताउँदै सुरू गर्छन्, उनीहरूले (दर्शकको लागि) शीर्ष दाँयामा हेर्छन्। त्यो (दर्शकको लागि) माथिल्लो बायाँतिर हेर्दै तपाईंको औंला बाहिर रहेको झूटो वा चूसने चिसोको स्पष्ट संकेत (भिजुअल निर्माण)।
रोनाल्ड बर्नार्डमा, यी संकेतहरू दृश्यात्मक छैनन्, किनभने उनी धेरै नै एनएचपी प्रशिक्षित हुन्छन् र त्यसैले उनीहरूको आँखा आलोचनामा सजग र अलर्ट गर्छन् र यसैले उनीहरूले उनीहरूलाई सिधा अगाडि सिधा राख्छन्।
16 अगस्ट 2017 मा 11: 15
@Allen पूर्णतया साँचो।
VAT कि इर्मे Schiffers साटानिक / म्याकनिक ग्याङ्गबैंग द्वारा लग रहेको छ यो टैटू द्वारा पुरा तरिकाले 'फिसल' छ। Haha।
यी सबै मानिसहरू को बारे मा भयानक कुरा यो छ कि तिनीहरूले केवल आफ्नो आत्मा शैतानलाई बेचेको छैन, तर धेरै मानिसहरू दुखी हुन्छन्, धम्की दिन्छन् र वास्तवमा आफ्नै भूमि र मानिसलाई धोका दिन्छन्।
यो यहूदी मूलका मानिसहरूको लागि सही होइन किनभने हामीले 1933 मा जर्मनी विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेका छौं (अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारहले जर्मनीमा युद्ध घोषणा गर्दछ)। देश, भाषा वा राष्ट्र तिनीहरू र तिनीहरूले 1 वा 10 पासपोर्ट के कि तिनीहरूले आर्थिक देश (हरू) र मान्छे (हरू) मा (अर्थात् धोखा, ठगी, आदि) पाउन रूपमा, एक hoot ख्याल जहाँ प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यी जासुसहरूलाई, trolls, AIVD (सहायक) एजेन्ट को विश्वासघात र जो तपाईं मा, सामान्य उच्च राजद्रोहको र cirsis / युद्ध परिस्थितिमा मृत्यु वाक्य अडान रूपमा बस समाजमा उपचार हुनेछ।
16 अगस्ट 2017 मा 17: 01
haha ... त्यसपछि उनीहरु गम्भीर अवस्थामा कुनै पनि अवस्थामा। आँखाको लागि स्न्याग
16 अगस्ट 2017 मा 11: 46
मैले जेरोन हुग्विज ओटीओ पुजारी सरकारको पुनरुत्थानको बारेमा थप जानकारी कहाँ पाउन सक्दिन? मैले थप नामहरू देखेको छु जुन वेबसाइटमा लिङ्क गरिएको छ, जस्तै एक जन लिबेंगाले पनि एक मार्टिन रिजन्डर्स भनिन्छ। मलाई लाग्छ यो एक धेरै ठूलो समूह हो, र smokescreen जसले 1 व्यक्तिलाई चिन्ता गर्दछ। सबै अमेरिकी रूपमा सैन्य अपरेसनको माध्यमबाट प्रशिक्षित गरिएको छ। त्यो तार्किक हो किनकि यो 1 वा मोमम मा एक नहर घर कार्यालय मा अन्य HBO शिक्षित टोल छैन। यी व्यक्तिहरू जुन पहिले नै यसमा परीक्षण गरिएका छन्, स्क्यान र यस्तो मार्फत। यसमा तिनीहरूले पहिले नै देख्न सक्छन् यदि तिनीहरू narcissistic हुन् र पर्याप्त आफ्नो बेवास्ता को सेवा को लागि बेजोड हो। यो केवल ट्रोलन को गुप्त संचालन मार्फत सम्भव छ। तर रोचक कम से कम पुजारी पक्ष हो, यसको बारे मा अधिक जानकारी छ?
16 अगस्ट 2017 मा 11: 59
जेरोन सजिलै संग फिर्ता लिन लागेका देखिन्छ। उनले पनि ठेगानाबाट Schiedam मा घुमाईयो (नजिकैको कता जहाँ कता बस्छ)।
जनवरी Libbenga म आफैलाई उजागर (यद्यपि Johan Oldenkamp, ​​जसले मेरो सबै सामग्री hijacks र यसको भिडियो बनाउँछ रूपमा यो उनको खोज थियो) किनकी मैले आफ्नो Adsense स्रोत कोड मा साइट कोड मा खाता पाउन सक्छ।
रोस्टिग स्पिजरर डेमिकिन अनुसन्धानको बेला म मारिया वान बोकेलेनलाई सम्झन्छु, मुस्कुराउँछिन् र उनी भन्छिन् कि उनी बारादुडा साइटको पछि लागेका थिए। उनले मलाई कहिल्यै भने, तर मैले आफैंको लागि फेला पारेको छु। त्यो हामी हामी परिवर्तन हुँदैछौँ (क्यामेरा प्रतिक्रिया पनि हेर्नुहोस्)।
यो "ठूलो क्लब!
16 अगस्ट 2017 मा 12: 04
जन Libbenga पनि Pieter Lakeman संग जोडिएको छ ... जो बारी मा मीका काट संग एक साथ काम गर्दछ।
सर्कल चक्र हो? हो, त्यो नजिकै छ ..
16 अगस्ट 2017 मा 12: 11
16 अगस्ट 2017 मा 12: 19
जेरोन हग्वेविज निश्चित रूप देखि एक अवस्थित व्यक्ति हो, किनकि मैले उसलाई व्यक्ति मा देखे र स्किडाम मा उनको दरवाजे को सामने उभिएको थियो
र मैले उनको ठेगाना प्राप्त गरेन, तर मैले उनको भ्रमण गर्दा कटोमा कोने को आसपास पार्क गरें र जेरोनको ठेगानामा भाग्यो। त्यो कटौती को लक्जरी अपार्टमेन्ट मा स्किनम को स्टेशन स्क्वायर मा कोने को आसपास को शाब्दिक थियो।
केट सुरु भएको थियो जब मैले उनीहरूको खोजको बारेमा जानकारी दिए र जेरीनको ढोकामा "रमाईलो" बाट रोक्न खोजे।
16 अगस्ट 2017 मा 12: 31
16 अगस्ट 2017 मा 12: 34
यसले लीक गरेको छैन।
Libbenga साल र वर्ष को लागि लुकाउन व्यवस्थित। उनले गुगल ऐडसेंस प्रयोग गरी गल्ती गरे जसले उनलाई ट्रेस गर्न योग्य बनायो।
मैले तपाईंलाई जेरोन बारे मेरो व्याख्या दिएँ।
यसैले एआईवीडीहरूको एक घेरा छ जुन दृश्य दृष्यमा शत्रुहरूको रूपमा कार्य गर्दछ, तर दृश्य पछि एकसाथ काम गर्दछ।
र यो दृश्य पछि पनि छैन। मैले सम्पर्क गरेको बेला कटले अझै पनि लम्मेण्टका लागि काम गरे।
त्यसैले बाराकुडाले स्वापिचाउ जस्तो किटको दुश्मन खेलेका थिए, तर किटको पीडाको शिकारको स्थिति (पिनपिक्स) को सशक्त पार्न दुश्मन चलाइएको थियो। तिनीहरूले साँच्चै उहाँलाई पराजित गरेनन् वा उहाँलाई अनचास गरेनन्। तार्किक: काट, जेरोन, लिबेबेंगा र लक्ष्मी सबै एउटै क्लबबाट हो
16 अगस्ट 2017 मा 12: 36
भर्जिन, तथापि, कता (एक सहयोगी साझेदारको रूपमा) उनको पक्षमा रहेको थियो र जेरोन हग्वेवीज र जन लिबेबेंगा (र उनीहरूको टोली) को कुरो गर्न अनुमति दिए।
उनीहरूले AIVD मा कसरी काम गर्छन्
16 अगस्ट 2017 मा 14: 22
जेरोन हगोगोइजी (शैतानिस्ट) लाई नाओमी भनिन्छ। उहाँ ट्रान्सगेंडर हुनुहुन्छ।
16 अगस्ट 2017 मा 14: 43
त्यो धेरै रोचक खबर छ! जडानहरू स्पष्ट हुँदैछन्!
16 अगस्ट 2017 मा 14: 47
तपाईं लगभग सोच्नु हुनेछ कि यो एक उल्लङ्घन मजाक हो ..
सम्भवतः जेरोनले उनीहरूको नयाँ पहिचानको कारण निर्बाध र निन्दाको लागि यस्तो सतावटबाट जोगिन सक्छ
16 अगस्ट 2017 मा 15: 59
यहाँ तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ http://www.frontaalnaakt.nl/archives/ik-ben-een-illuminatus.html उहाँले रोमनीको बारेमा के लेख्नुभयो। उनले मान्दछन् कि त्यो एक रोमनम्यान र आरटीडीको सदस्य हो। आरटीडी को एक सदस्य को रूप मा, त्यो निश्चित रूप देखि सबै को विलक्षण अनुष्ठान संग Aleister Crowley को शिक्षाहरु को पूरी तरह देखि अवश्य हुनु पर्छ।
16 अगस्ट 2017 मा 17: 56
एलेस्टर Crowley एक गोप्य एजेन्ट थियो / जासूस MI6 को लागि। सबै जस्तै
जासूस सधैं सँधै यात्रा गर्थे। उनीहरूको कस्तो ऊर्जा छ।
16 अगस्ट 2017 मा 18: 00
Freemasons / RTD को उन ड्रेसिंग पार्टियों को एक अव्यवस्थित स्थिति मा 'सदस्य' ल्याउन को लागि आदर्श अवसर हो र फेरि ब्लैकमेल गर्न को लागि।
16 अगस्ट 2017 मा 12: 29
त्यो कहाँ बाट आयो? तपाईं अगाडी बढाउनुहोस्।
16 अगस्ट 2017 मा 12: 53
ती सबै ठूला साइटहरु जस्तै गेनस्टिज, टेलिग्राफ (फेसबुक डिपार्टमेन्ट डन), अघिल्लो नजज। एन आदि आदि आदि सेना 100% को माध्यम ले प्रशिक्षित गरिएको छ। अमेरिकामा जस्तै, यो यहाँ नीदरल्याण्डमा पनि भइरहेको छ। ती सबै सयौं प्रतिक्रियाहरू प्रायः मात्र एक मुट्ठीवादी रौतहटद्वारा ट्याग गरिएका छन्। यी मान्छे प्रायः तिनीहरूले के गर्छन मा महारतजनक हुन्छन्, उनीहरूलाई 'मन हेरफेर' मा प्रशिक्षित गरिन्छ र प्रत्येक चाललाई जानकारी, समूह कार्य र व्यवहारलाई प्रभाव पार्नको लागि थाहा छ। तिनीहरूको अन्तिम लक्ष्य 'समूह एफ ** केन' को सम्पूर्ण समूह हो।
धेरै श्रोताहरू यो गोप्य सेवा / सैन्य कालो OPS अपरेशन संग सम्बन्धित छन्। हरेक पत्रले यो लेख्ने नकली र नकली हो जुन सबैले जान्दछन्। सबै ड्रोकनियनहरूको सेवा गर्न र अन्ततः आत्मा अधिग्रहण गर्न, तर यो एक फरक फरक कथा हो।
ती सबै तथाकथित पुनरुत्थानहरू (प्रायः सैनिक भाइहरूमध्ये एक मुनि) जहाँसम्म मैले एयर सञ्चालन नियन्त्रण स्टेशन नयाँ मिलिगेनबाट अनुसन्धान गरें। इन्टरनेटमा ती केहि अनचालक ट्रेलहरू जुन मैले भाइको माध्यमबाट हेर्छु कोटा टाटा फेन्ट (हामी पनि एक जादुई पुजारी कम्पनी हो) 1 पछि कुनै शैलीमा भ्रातृ प्रेम गंभीरतासाथ बिरामी भएको थियो।
तर फेरि उनीहरूले यो गर्न सक्षम भएका छन्, र केवल पत्रकारहरु जस्तै क्रिसजे क्लोम्प (जुन नयाँ माइलिङन एफ एफ सर्चबाट हुने हुन्छ) र मार्सल हुलस्पेस जसले स्किपिस आधारको लागि काम गरे। र पनि गोप्य एजेन्ट। यहाँ मेरो भिडियो हेर्नुहोस् ...
यो संदेह पनि बाराडाडा संग जुडा भयो किनकी उनि पनि हॉलर को रिपोर्ट गरे, र हलस्पेस पनि नेइयु माइलिंगन मा एयर फोर्स संग संपर्क मा आए। 100% त्यहाँ केवल3एक4पछाडिको लागि वा सबै दिन लामो समय सम्म केहि ट्रेलिंग सबै बेपरवाही ट्रल्स। यो लेखकको संसारमा विजेताहरूको भन्दा अरु केहि छ। यद्यपि सबै कुरा स्वाभाविक रूपमा एक नै आर्कनोटिक सञ्जालद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ।
यसले यो पनि लेखेको छ कि विश्वयुद्ध (जस्तै डच र विश्वभर सबै सेनाहरू) सोशल मिडियाले नक्कली खाताहरूमा हेरफेर र छलफल र प्रसार फैलाउन प्रयोग गरिन्छ। यो 'अनलाइन पर्सन व्यवस्थापन सेवा' शीर्षकको अन्तर्गत गरिन्छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य नि: शुल्क भाषणमा सीमित गर्न हो। यो ठूलो मिडिया छ कि छिमेकले फाउन्डेशनको लागि मिडियालाई इजाजत गर्दछ।
हामी सैन्य र सैन्य खुफिया सेवाहरु द्वारा नियन्त्रित, परित्याग र हेरफेर गरिन्छ। गोपनीय सेवाहरू त्यहाँ सबै सम्भावित फ्यानहरूमा विश्व स्तरको पछि लाग्नका लागि सुरक्षाहरू छन्।
16 अगस्ट 2017 मा 13: 02
स्वापाचाउ पनि जिवको साथमा एक टेल्मट क्लब थियो जुन इजरायलका सेनामा सेवा गरिसकेको थियो र अंशकालिक नौकरीको रूपमा स्वैपेचमा लेखेको थियो। मलाई मेरो सङ्ग्रहमा सैन्य इजरायली वर्दीमा हङकङ (सैन्य कुकुर) संग उनको फोटोको लागि डुब्नको लागि।
16 अगस्ट 2017 मा 12: 54
यसैले प्रतिक्रियाहरूको बारेमा मेरो रिजर्भेसन छ
Ramonvdwal। अझै निष्कर्ष निकाल्नुहोस्।
16 अगस्ट 2017 मा 16: 24
मैले निष्कर्ष निकाले, उनको YT च्यानल 'एयरवव' हेर्नुहोस्।
औपचारिक रूपान्तरणको नकली पीडित टोओस निजेनहाइज र यूएफओहरूले यो कुरालाई सम्हाल्छन्।
त्यो4वर्ष पहिले थियो, तर भिडियोहरू पछि जागरणमा हटाउन सकिन्छ।
आज यहाँ उनको प्रतिक्रियाहरु जस्तै MV मा धेरै खराब तरिकाले गम्भीरतापूर्वक राख्न र ऊर्जा राख्ने जस्तो देखिन्छ।
16 अगस्ट 2017 मा 16: 46
मैले देखेको छु कि तपाईंले अनुसन्धान गर्नुभयो। राम्रो। ठीक छ, मार्टिन निर्णय गर्न दिनुहोस्।
16 अगस्ट 2017 मा 16: 53
छोडेर टोकरी मार्फत जान्छु।
16 अगस्ट 2017 मा 17: 47
वास्तवमा .. "बिस्तारै"
16 अगस्ट 2017 मा 13: 16
त्यसपछि तपाईंले ती गल्तीहरूलाई तल राख्नुभयो
16 अगस्ट 2017 मा 16: 05
टोल अलार्म !!
RamonvdWal बिल्कुल एक troll / ऊर्जा पिशाच छ
यूएफओ को बुल्लट, केविन एनिट को भिडियो, टोओस निजेनहुज।
लक्ष्य: अनन्त छलफलहरू उत्प्रेरित गर्न।
16 अगस्ट 2017 मा 17: 53
16 अगस्ट 2017 मा 17: 19
@RamonvdWal cit "... 200.000 अवतारले पैसा वा तंग सूटसँग केही गर्न सक्दैन। तर उहाँ सुखी मान्छेहरूको लागि अर्को बैंक शुरु गर्नुहुन्छ .......
सबै भन्दा राम्रो रामोन म यसो भन्छु: "अचम्मलाग्दो मानिसहरूको लागि एक शुभ बैंक"।
मलाई आशा छ कि तपाईं यस पुनर्मर्पण मा (त्यो इंदिस दर्शन मा छ कि तरीका छ) तपाईंको MEDE व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी र सही *)
यदि छैन! त्यसो त उनीहरुको तौल र स्याङ्जाको पछाडीको बिरोध पनि हो।
*) आशा छ तपाईंलाई थाहा छ कि कितना दुखाइ र शक्तिको मनोकोथस व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने !!!
16 अगस्ट 2017 मा 21: 40
यस लेखमा मार्टिनले आज लेखेको छ "हामी" लुकेका चिन्हहरू "को स्क्रिनसट देख्छौं।
अरुण बोस् तिनको 666 गर्दै।
म त्यहाँ बोस भन्छु, मा टिप्पणी गर्न चाहन्छु; "मैले आफ्नै ऊर्जामा पाएको छु, म मेरो शरीरको हेरचाह गर्नेछु।" Etc.etc।
मलाई लाग्छ कि यति सुन्दर छ, त्यो आफ्नै ऊर्जामा उठ्यो। उसले त्यो कसरी प्राप्त गर्छ?
17 अगस्ट 2017 मा 14: 59
17 अगस्ट 2017 मा 15: 51
हेफ्टी जोरिस, आशा छ कि तपाईंको सन्देश सुनेका मानिसहरू अहिले भाषणको दमनको यस देशमा के के गर्दैछन् के माध्यम ले जान्छ। (हामीसँग यस सम्बन्धको कुनै स्वतन्त्रता छैन, जुन अब स्पष्ट प्रमाण छ)
तपाइँ अझै पनि पठाउन र तस्बिरहरू सार्नु पुन: प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? यदि यो स्क्रिन क्याप्चर हो?
17 अगस्ट 2017 मा 16: 09
राम्रो हुनेछ, हो, यदि यो बिस्तारै जानेछ। ???? मलाई थाहा छैन किन मैले3हड़ताल पाएको छु तर मलाई थाहा छ कि अरु च्यानलहरू देखाउन नसक्ने च्यानलहरू सबैभन्दा लामो छन् ...
17 अगस्ट 2017 मा 17: 10
नेदरल्यान्ड्समा अभिव्यक्तिको कुनै स्वतन्त्रता छैन। यो विशुद्ध रूप देखि संविधान मा विपणन को रूप मा शामिल छ, कि यस मामला को लागि, कानून को विरुद्ध परीक्षण गर्न सक्छन् र यसको विपरीत। यदि स्वतन्त्रता थियो भने, हामीले उपनामहरूसँग प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छैन। तपाईं आफ्नो बयान को बारे मा सूक्ष्म नहुन सक्छ र तिनीहरूले तपाईलाई बन्द गरेको छ। अभिव्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समूह / सरकार द्वारा निर्धारण गरिएको सामूहिक कम्युनिस्ट विचारको रूपमा मात्र हो। यो वेबडोनबाट विवेक। यो सबै कुरा सबैको लागि बन्द छ, निस्सन्देही, भेडा के बारे मा सोच्न को लागी र कसरी स्वीकृत र कसरी कसरी अनुमोदित राज्य प्रचार संग भेडा को भगावश को खोज गर्न सक्षम हुन सक्छ। मलाई आश्चर्य छ कि तपाईं एक छापिएको छ कि तपाईं एक 'मुक्त' देशमा बस्नुहुन्छ।
18 अगस्ट 2017 मा 04: 32
ठीक छ, सत्य पानीबाट बाहिर आउन सक्दैन।
ग्लोडिया राज्य, तनावको नीति। स्पेन फेरि फेरि चेतावनी दिइएको छ कि बेबिलोनियरहरू / नबिर्सन नगर्ने द्वारा चेतावनी दिईएको छ
तर (जारी राख्नुहोस्) बोबनिक स्टस क्वोमा भाग लिनुहोस्। माफिया वास्तवमा भन्छ।
18 अगस्ट 2017 मा 15: 19
वाह Iķ तपाईं मजा आयो ...
20 अगस्ट 2017 मा 11: 31
म पनि मार्टिन एर्कमेनहरू चेतावनी दिन चाहन्छु। फेसबुकल्याण्डमा एक नयाँ उर्लिएको तारा अचानक प्रसिद्ध नामहरू (मार्टिजेन भ्यान स्टेभेनन, मार्टिन होर्स्ट, इत्यादि) सँग सबै प्रकारका साक्षात्कारहरू छन् र सम्पूर्ण क्लबको साथ राम्रो साथीहरू छन्। मिडिया ... तपाईलाई थाहा छ: दिशानिर्देश जुनकर्स, आदि।
यो एक ठूलो एआईवीडी क्लब हो
तपाईँले मोटो मार्फत छोटो छोटो भेट्टाउनुहुन्छ। ठीक छ: तपाईं यी सुरक्षा जाली बगैंचामा खुला-खुसी बगाउन सक्नुहुन्छ।
तिनीहरू मशरूम जस्तै उठ्छन् र जङ्गल ठूलो र ठूलो हुन्छ। तपाईं रूख मार्फत जंगल देख्न सक्नुहुन्न ... यो इरादा हो।
यद्यपि यो एक प्यारी केटा हो! एउटा दृष्य लिनुहोस् ... साँच्चै कसैलाई जसले तपाईंको बच्चालाई साँझ साँझ दिन अनुमति दिन्छ:
20 अगस्ट 2017 मा 11: 39
मार्टिन एर्कमेनहरू जस्तै तपाईंको नयाँ खरिद नयाँ कारमा खरिदमा ध्यान केन्द्रित गर्न मनपर्छ। सबै विचलनहरू, विशेष गरी हराएको इन्जिनमा नदेख्ने।
यो ज्ञात विषयहरूको बारेमा हो:
.आईटीटीटीएस (बाल बलिदान र यस्तो, बेटेरिक्स अनुष्ठान बलिदानको लागि बच्चाहरु लाई भर्ती गर्दछ)
र अधिक चीजहरू जुन राम्रो / कालो छवि रङ लगाउँदछ, तर तपाईंले लुकेको तस्बिर देखाउनुहुन्न।
लेखमा कालो र सेतो चित्र राम्रो लगाउनुहोस्।
मिडियाले कालो प्रतिनिधित्व गर्दछ।
वैकल्पिक मिडिया सेतो (वा बरु "50 छालाका रंगहरु")
तर तपाईं वास्तविक तस्विर देख्नुहुने छैन जबसम्म तपाई बीचको बिन्दुहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुँदैन र त्यसपछि तपाईंको आँखा झिम्किन्छ
20 अगस्ट 2017 मा 12: 07
यो एक ठूलो क्लब हो:
कहिलेकाहीँ नकली प्रोफाइलहरू बीचको बीचमा:
20 अगस्ट 2017 मा 13: 34
ठीक छ, यो सधैं राम्रो छ र यदि तपाईं जासूस हुनुहुन्छ भने सरकारको लागि पैसा बनाउन सजिलो छ।
26 अगस्ट 2017 मा 06: 43
मैले एफबीमा ती मार्टिन एर्कमेन सन्देशहरू पढेको छु।
कसैले पनि गर्न सक्छ। यो नियन्त्रित विरोध कसरी काम गर्दछ भन्ने पाठपुस्तक हो।
धेरै जगेडाहरू खुल्ला आँखाले लात हाल्छन्। 911 को सन्दर्भमा, उदाहरणका लागि, उहाँले लूका Rudkowski लाई बोलाइरहेको छ।
र ओरेन्ज ओमेपालले (ट्रम्प) धेरै खराब छैन किनकी उसले यसो भनेका छन् कि 911 भित्रको काम थियो।
CO2 द्वारा ग्लोबल वार्मिंग।
(र यो थाहा छैन कि बर्फ अन्तिम बर्फ सम्मको पोलहरूमा छ।) आदि आदि।
र बाकीको लागि सामान्य रणनीतिहरूको अनुसार धेरै सन्देशहरू।
आधा सत्य र सम्पूर्ण सत्यसँग सम्पूर्ण झूठहरू मिलाउनुहोस्।
26 अगस्ट 2017 मा 07: 07
र क्रिस डेन दास फेसबुकमा आफ्नो साथी मध्ये एक हो।
भेडाको कपडा क्रिस डेना दासमा यो कमाल छ?
क्रिस डेन दासले संचार (इ-मेल ट्राफिक र मनपराउने) बनाएको हो भने सुपैले एसओपीएनमा जान भने। त्यहाँ सम्भवतः विशेष रूपमा ग्रहण गरे। (त्यसो भए अझै पनि जोहान ओ।)
यूट्यूब त्यहाँ अर्को भिडियो हो जसको साथ उहाँ बताउनुहुन्छ कि कितना व्यस्त थियो। डटहरू जोड्नुहोस्। र चीटरहरू चिन्न सिक्न।
20 अगस्ट 2017 मा 13: 37
माफ गर्नुहोस्, जब तपाईं सरकारको लागि जासूसको रूपमा काम गर्नुहुन्छ पैसा बनाउन सजिलो छ।
« रोनाल्ड बर्नार्डले वैकल्पिक मिडियाको माध्यमबाट एक राम्रो अभिनेतालाई स्वीकारे
बार्सिलोनामा आक्रमण: एउटै लिपि, पासपोर्ट र इम इमारत पाइन्छ »
कुल भ्रमण: 2.549.019